Calanka.com – Imaaraatka oo ku fashilmay weerarkii shirqoolka ahaa – By: C/Qaadir
Imaaraatka oo ku fashilmay weerarkii shirqoolka ahaa – By: C/Qaadir
in Ra`yi — By Admin —	January 2, 2018 -- 2050 Views
Ugu horeyn; waxaan rabaa in aan cadeeyo in qoraalkan aan kusaleeynayo taleefankii uu taliyaha NISA ee gobolka Banaadir ugu sheegay senator Cabdi Qeybdiid, in ciidanka sooweeraray yihiin “Ciidamo Imaaraatka sootababareen” sida Cabdi Qeybdiidba shirkiisii-Jaraa’id kusheegay, iyo guud ahaan aqrinteeyda iyo fahamkeeyga waxa socda, iyo jawiga siyaasadeed ee dalka kajira. Waxaa dancan jiridoona baaritaan dowladeed, kaasoo lagayaabe in shacabka lalawadaago waxa kasoobaxa, ama qeyb kamid ah oo kaliya, iyadoo la ilaalinayo danaha qaranka Soomaaliyeed, ileyn siyaasada laguma maareeyo shucuure “emotions”. Waxaa laga yaabaa in dowladu sihoose dagaal isdifaacid ah, oo aan la iclaamin ugu qaado Imaaraatka. Waxaa sidoo kale lagayaabaa in dowladu tixgaliso, waxa kadhalankara iyo sida “Qaran-Dumiska” uga faa’ideeysankaro Imaaraatkoo dagaal siyaasadeedoo kor loosheego (Public), iyadoo dhaqaalaha Soomaaliyeed ee ugu badan Imaaraatka xoogiisu yaallo, kuwaasoo ah shirkadaha ugu waweyn, oo kuwa Xawaaladuhu kujiraan, waxbadanna inooga xeranyihiin, maadaama xarumahooda ugu waaweyn (Headquarters ) Imaaraatka yihiin, iyo xaalada burbur kasoo kabasho ee aan kujirno intaba.
Maamule-Kuxigeenkii hore ee Kulliyada Maamulka Iyo Dhaqaalaha, isla Kulliyadaana Macallin/Bare ka ahaa. Al-Madinah International University